ရွှေနိုင်ငံ: ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူလက် မှတ်ရေးထိုးနိုင်မလား..?
ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူလက် မှတ်ရေးထိုးနိုင်မလား..?
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လာမည့်ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးလိုကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့၌ တိုင်းရင်းသား လက် နက်ကိုင် အဖွဲ့များထံ ကမ်းလှမ်းမှု ပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုလည်း ပြည်ထောင်စုနေ့ရောက်ရှိရန် ရက်ပိုင်းသာ လိုတော့ သည့်အချိန်တွင် အပစ်ရပ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြုသဘောဆောင်သော စကားများ ကြားနေရသလို အပျက်သဘောသက်ရောက်သော စကားများက လည်း ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ အပစ်ရပ် လက်မှတ်ထိုးနိုင်ရေးကို အများစုကတော့ ထိုနေ့တွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်မြောက် စေချင်သောဆန္ဒရှိနေကြ ပါသည်။
အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းဘ၀ရောက်လာတော့မှ ယခုကဲ့သို့ တစ်နိုင်ငံလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အားကြိုး မာန်တက် ဆောင်ရွက် နေကြသည်များကို မြင်ရကြားရတော့ အလွန်ပဲ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါသည်။ ၀န်ထမ်း ဘ၀နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့တုန်းက တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ကို တကယ်လိုလားတောင့်တနေသူများမှာ ထိုဒေသတွင် နေထိုင်ကြသော ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့က ဧည့်သည်မို့ ထိုဒေသမှ ပြန်လာခွင့်ရသော်လည်း သူတို့ကတော့ နေမြဲနေကြရဆဲ၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို ငတ်မွတ်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် လာမည့်ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက် မှတ်ထိုးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး နေမိပါသည်။ သို့သော် အပြုသဘောဆောင် စွာ အများက ဖြစ်စေချင်ပေမယ့် KIO/KIA အဖွဲ့ဆီမှ ထွက်ပေါ်လာသော လေသံများက စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါသည်။ KIA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်က DVB နဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခန်းမှာ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးရန် မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ စက်တင်ဘာမှာ NCCT နဲ့ UPWC တို့ တွေ့ဆုံခဲ့သောရလဒ်က အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်းကြောင့် လည်း ကောင်း၊၇ ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မစနိုင်သေးခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းဟု ပြောကြားသွားသည်။
ထိုအကြောင်းပြချက်သည် NCCT ဒုဥက္ကဋ္ဌ အနေဖြင့် ၎င်းအဖွဲ့ကိုယ်စား ပြောဆိုခြင်းပေလား၊ သို့တည်း မဟုတ် KIA အဖွဲ့ရဲ့ သဘောထားလား မေးစရာဖြစ်နေပါသည်။ KIA အဖွဲ့သည် ယနေ့အချိန်ထိ ပြည်နယ် အဆင့်ကိုပင် အပစ်ရပ် လက်မှတ်မထိုးနိုင်သေးသော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အခြားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၁၄ ဖွဲ့ က လက်မှတ်ထိုးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၄ ဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင် များက အစိုးရနဲ့ အပစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတာတောင် KIA က ဘာဖြစ်လို့ မထိုးရတာလဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေး တကယ်မလိုလားလို့သာ လက်မှတ်မထိုးခြင်းဖြစ်ကြောင်း အများက ထောက်ပြပြောဆိုနေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။
KIA အဖွဲ့ လက်မှတ်မထိုးရုံဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် မထိုးနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဟု မြင်မိပါသည်။ KIA ကလွဲရင် အခြားသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက လက်မှတ်ထိုးရန် ဆန္ဒပြင်းပြနေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အင်အားကြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များဖြစ်ကြသော ကရင်အမျိုးသား အစည်း အရုံး(KNU)၊ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီနှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်(RCSS/SSA)၊ `၀´ ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော်(UWSA)နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDAA(မိုင်းလား) အဖွဲ့တို့သည် မိုင်းလားအဖွဲ့ဌာနချုပ်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု သိရပါသည်။
ထိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှ ထွက်ပေါ်လာသောရလဒ်အရ KNU၊ RCSS/SSA၊ UWSA`၀´နှင့် NDAA(မိုင်း လား) အဖွဲ့အပါ အ၀င် အချို့သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများက တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေး အမြန်ဆုံး လက်မှတ်ရေးထိုးလိုကြသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများဆီ အမြန် သွားလိုသော စိတ်ဆန္ဒရှိနေကြကြောင်း လည်း သိရပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့သော အပြုသဘောဆောင်သည့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုမိပါသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် RCSS/SSA အဖွဲ့အနေဖြင့် ဇန်န၀ါရီလ လယ်လောက်က နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ အမြန်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ကို ဖတ်လိုက် ရ၏။ ထို့ပြင် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများကလည်း လွန်ခဲ့သည့် နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် UWSA`၀´နှင့် မိုင်းလားအဖွဲ့များထံသို့ သွားရောက်၍ တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရန် စည်းရုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါ သည်။
သို့ဆိုလျှင် အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးကို လိုလားနေ ပြီဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်စေပါသည်။ သို့သော် KIO အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ လဂျာက တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးရန် နှင့်ပတ်သက်၍ လက်မှတ်ထိုးစရာ အကြောင်းမရှိဟု ၆၆ နှစ်မြောက် ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားမှာ ပြောကြား သွားခဲ့ သည်ဟု သိရပါသည်။ DKBA မှ ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် စောမိုရှေးကမူ KIA ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချဉ်းကပ်သော လမ်းစဉ်မှာ မှားယွင်းနေကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် KIA ပါဝင်လာအောင်လည်း အစိုးရနဲ့ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သော်လည်းကောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအရသော်လည်းကောင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆို လိုက်ပါသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ငြင်းဆန်နေတာ KIO/KIA အဖွဲ့သာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် KIO/KIA အဖွဲ့ရဲ့ လက်ရှိခေါင်းဆောင်များက လက်မှတ် မထိုးဘူးဆိုရင် လက်မှတ်ထိုးမယ့် အခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များနဲ့ စကားပြောသွား သင့်ပါသည်။ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ် ရေးမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံးပါဝင်နိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဟု ဆိုသော်လည်း KIO/KIA မပါ လျှင်လည်း အခြားအဖွဲ့များနှင့် အကောင်းအထည်ဖော်သွားသင့်သည်ဟု မြင်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူလက်မှတ် အမှန်တကယ် ရေးထိုးနိုင် မလားဆိုတာ စောင့် ကြည့်သွားရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။